YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, October 01
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/01/20130အကြံပြုခြင်း
စမ်းချောင်း ကိုကိုကြီး နှင့် ကို Nyan Linn တို့တင်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုကို အကုန်ဆက်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန် ၊စက်တင်ဘာ ၃၀။ ။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP တစ်ဦး ကျဝင်ငွေတိုးတက်မှုမှာ ဒေါ်လာ ၃၂ဝဝကျော်အထိမြင့် တက်လာ နိုင်ကြောင်း အာရှဖွံ့ဖြိုး ရေးဘဏ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ADBI (Asian Development Bank Institute) ၏ထုတ်ပြန် ချက်များအရသိရသည်။
၂၀၁ဝပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ တစ်ဦးကျဝင်ငွေမှာ ၇၁၄ ဒေါ် လာသာရှိနေရာ မှ လက်ရှိဖြစ် ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်မှုအပေါ် မူတည်ကာ မြင့်တက်လာဖွယ် ရှိ ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ် စဉ် GDP တိုးတက်မှုမှာ ရဒသမ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိနေရာ လာ မည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း GDP တစ်ဦးကျဝင်ငွေမှာ ယင်းပမာဏ အထိရောက်လာမည်ဖြစ်သည်ဟု ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းက ADBI ထုတ်ပြန်ချက်စာရင်းများအရ သိ ရသည်။
အခု ၇၀၀ ကျော်ကနေ လေးဆ လောက်တက်ဖို့ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံ လိုခုန်ပျံကျော်လွှားသွားနိုင်ဖို့လို တယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ့် နိုင်ငံက အဲလောက်တိုးတက်တဲ့ အချိန်မှာ တခြားပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတွေရဲ့ မြင့်တက် လာမှုကိုလဲ ယှဉ်ကြည့်မှ စီးပွားရေးအမှန်တ ကယ်တိုးတက်တယ်လို့ ပြောလို့ ရ မယ်''ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးကျ ဝင်ငွေတိုးတက်မှုမှာ ၃၂၁၆ ဒေါ် လာဖြစ်ပြီး လာအိုနိုင်ငံမှာ ၃၆၂၂ ဒေါ်လာ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ၄၃၃၆ ဒေါ်လာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ၂၉၃၃ ဒေါ်လာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ၅၀၃၄ ဒေါ်လာ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မှာ ၁၀၅၈၁ ဒေါ်လာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ၁၄၂၀၄ဒေါ်လာ၊ မလေးရှား နိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာ၂၄၇၈၀၊ စင်ကာ ပူနိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာ ၇၉၃၀၀၊ ဘရူ နိုင်းဒါရူဆလန်နိုင်ငံမှာ ၇၅၄၃၂ ဒေါ်လာအထိအသီးသီး ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ အာဆီယံ၏ ရှေ့ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုမှာ တည်ငြိမ်သောစီးပွား ရေး အခြေများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသော CLMV ဟုခေါ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာ အို၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်တို့၏ဖော် ပြပါစီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း ရောက်ရှိရန်အတွက်ဆိုလျှင် နိုင်ငံ တွင်း နယ်ပယ်အသီးသီး၏ဖွံ့ဖြိုးမှု ကျဉ်းမြောင်းမှုလုပ်ဆောင် ရန်မှာ အဓိကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မှာ အစိုးရက သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ယူကလစ်ပင် စိုက်ခင်းတွေကို ဝင်ရောက်ခုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ ရွာသားတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် နေ့မှာ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာကနေ ရွာသားတွေနဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ ကျည်တောင်ကန် ရဲစခန်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က သွားရောက် အစစ်ဆေးခံခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
မြိတ်မြို့ မှာ ရဲများက ကျောင်းသား လေးဦးကို အုပ်စုဖွဲ့နဲ့ရိုက်နှက်
မြိတ်မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များအတွင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ သွားလာကာ ညပိုင်းအချိန်များတွင် လမ်းသွား လမ်းလာများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကာ စီးနင်းသူများအား အကြောင်းမဲ့ ဓားဖြင့် လမ်းသရဲ ဆန်ဆန် လိုက်လံ ခုတ်ထစ်နေသည့် လူငယ်(၇) ဦးအား မြိတ်မြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ၊ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူများမှ ၀ိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ ည (၁၁)နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် လူငယ် တစ်အုပ်သည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် မြိတ်မြို့အတွင်း နောက်လယ်ရပ်ကွက်မှ စတင်ကာ လမ်းသွားလမ်းလာများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်း သူများအား ၄င်းတို့တွင် အဆင်သင့် ပါလာသည့် ဓားများဖြင့် မော်တော် ဆိုင်ကယ် စီးနင်းပြီး လိုက်လံ ခုတ်နေကြောင်း သတင်းအရ ပူးပေါင်း အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရာ သက်ပိုင်ဦး အသက် (၁၇)နှစ်၊ ကျော်စိုးထွန်း အသက် (၁၉)နှစ်၊ အာကာစိုး အသက် (၁၇)နှစ်၊ အေဟင်ဇင်မိုး အသက် (၁၈)နှစ်၊ အောင်သူရပိုင် အသက် (၁၈)နှစ် ၊ အားမာန်ပြည့် အသက် (၁၇)နှစ်၊ ကျော်ရန် အသက် (၁၆)နှစ်၊ တို့အား ၄င်းတို့ ကိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဓားများနှင့်အတူ ပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဓားဖြင့် လိုက်ခုတ်သည့် လူငယ်များအား မြိတ်မြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားကာ အမှုဖွင့် အရေးယူနိုင်ရေး စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
လက်ပံတောင်းမှာထုတ်မယူတဲ့ လျော်ကြေးတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ ထူထောင်
အစိုးရ၀န်ထမ်း ခုနှစ်သိန်းကို လာမဲ့နှစ်မှာ လစာမပေးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်
အစိုးရ၀န်ထမ်း ခုနှစ်သိန်းကို လာမဲ့နှစ်မှာ
လစာမပေးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်
A view of the U.S. Capitol at night, on the eve ofapotential federal government shutdown, in Washington. (Reuters)
The US government has partially shut down afteramidnight deadline to approveabudget for 2014 passed despite an eleventh-hour appeal by President Barack Obama.
The Republicans, who haveamajority in the House of Representatives, were firm on their view that the House should delay Obama's healthcare reforms in order to pass the budget.
Their proposal was rejected by Democrats in the Senate, who said it was too late to avertashutdown.
Subsequently, the budget office at the White House began notifying federal agencies to beginashutdown.
" ကမန် ” (သို့မဟုတ်) “ ကုလား ” ၀င်ပေါက်
" အမှန်က နှစ်သောင်းလောက်ရှိတဲ့ ကမန်လူမျိုးဟာ နှစ်သိန်းလောက်ဖြစ်နေလို့ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားတယ်၊ ကုလားကို ကမန်ဖြစ်အောင် လ၀ကကပဲ လာဒ်စားပြီး လုပ်ပေးနေတာ၊ ခံရတာက ကျွန်တော်တို့ကမန်တွေပဲ "လို့ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်က " ကမန် "တစ်ယောက် BBC ကျေးတမာနဲ့ပေဖူးလွှာကဏ္ဍကနေ ၂၀၀၄-ခုနှစ်လောက်က ထအော်တာကို ကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ ကမန်အသွင်ပြောင်းလဲမှုကို တင်ပြချင်နေခဲ့တယ်။ ခုအခြေအနေမှာ လိုအပ်ချက်ကလည့် ရှိနေပြီမို့ အုပ်စိုးသူအပါအ၀င်၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ မြန်မာရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူပြည်သားတွေ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်အောင် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၉၉၂-ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ သိမ်ကျောင်းရွာထိပ်မှာ ကျွန်တော်က သစ်စက်လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ကပ်ရပ်ကုန်ခြောက်ဆိုင်ကို ဈေးဝယ်ရန်သွားတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အထူးခင်မင်ရင်းနှီးနေတဲ့ ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးက" ဒါမင်းတို့ရခိုင်ပြည်က ကမန်လူမျိုးတွေပဲ "လို့ လူစိမ်းငါးယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။
ကျွန်တော်က "မင်းတို့ဘယ်ကလဲ"လို့ ရခိုင်စကားနဲ့မေးလိုက်တော့၊ လ၀က ပုံစံစာရွက်တွေ ဖြည့်နေသူတစ်ဦးက "မြောက်ဦးမြို့ကပါ "လို့ ရခိုင်စကားနဲ့ပြန်ပြောတယ်။ "မြောက်ဦးမြို့ ဘယ်ရပ်ကွက်ကလဲ"လို့ ထပ်မေးတော့ "ရွှေဂူတောင်ကပါ"တဲ့။ "ငါမြောက်ဦးမြို့သားပဲ၊ ရွှေဂူတောင်မှာ ကုလားပဲနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်၊ ကမန်မှမရှိတာ"လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ သူငြိမ်သွားတယ်။ ကျန်လေးယောက်ကို "မင်းတို့ကကောဘယ်ကလဲ"လို့ ရခိုင်လိုမေးတော့ နားမလည်သလို ပြန်ကြည့်နေလို့၊ ဗမာစကားနဲ့ မေးလိုက်တော့လည်း နားမလည်ကြ။ ပထမဆုံး ရခိုင်လိုဖြေခဲ့တဲ့လူကိုပဲ ကုလားလိုမေးနေကြတယ်။ အဲဒီလူက သူတို့ကို ကုလားလိုပြန်ပြောလိုက်တော့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မျက်နှာနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ငေးကြည့်နေကြတယ်။ အဲဒီ ၄-ယောက်က ရခိုင်ပြည်မှာပင် မနေဖူးပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျက တိုက်ရိုက်ဝင်လာသူတွေဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်။
" သူတို့ခမျာ မြန်မာစာလည်းမရေးတတ်တော့ ငါကပဲဒီပုံစံတွေကို ဖြည့်ပေး၊ တို့ရှေ့က လ၀ကနဲ့ ဆက်သွယ်ပေး လုပ်နေရတယ်။ လ၀က က တစ်ယောက်ကို သုံးထောင်ကျပ်နှုန်းယူတယ်၊ အဒေါ့်ကိုတော့ လ္ဘက်ရည်ဖိုးလောက်ပဲပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လာလုပ်တဲ့ ကမန်တွေကများတော့ အိမ်စရိတ် နည်းနည်းပါးပါး ကာမိတာပေါ့ "လို့ ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးကပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ သစ်စက်ရှေ့မှာရှိတဲ့ လ၀ကရုံးကလူကြီးတွေ ညဘက်မှာလည့် အိမ်မပြန်ကြပဲ စားကြသောက်ကြ၊ တရုန်းရုန်းနဲ့ မိန်းမပျက်တွေနဲ့ ပျော်ပါးနေကြတာ ဒီဝင်ငွေကြောင့်ပဲလို့ နားလည်လိုက်တယ်။
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံအနှံ့ မြို့သစ်တွေဖေါ်ပေးနေတယ်၊ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွေကိုပါ မြို့သစ်တွေမှာ နေရာချထားပေးတော့ သန်းခေါင်စာရင်းပျောက်တဲ့လူနဲ့ မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့လူတွေ အများကြီးဆိုတော့၊ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတာကို လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ လုပ်ပေးနေခဲ့တယ်။ ဒီအကွက်ကို ကုလားတွေက ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး လှိမ့်ဝင်လာတာတွေ အကုန်လုံး မြို့သစ်တွေမှာလာပြီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ကြတယ်။ မှတ်ပုံတင်မှာမှ " ဘင်္ဂလီလူမျိုး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အဆင့်တင်မကပဲ၊ ကမန်လူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား " အထိ လုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်။
မြို့သစ်ပေါင်း မြောက်များစွာမှာ သူတို့ဘယ်လောက်များများ လုပ်သွားကြပြီလဲ၊ တွေးကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်က ကမန်တစ်ယောက် ၂၀၀၄-ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ BBC ကနေပြောလိုက်တဲ့အချိန် နှစ်သိန်းရှိနေပြီဆိုတော့ ခုဆိုဘယ်လောက်များ ရှိနေပြီလဲ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ရဲ၊ စစ်တပ်တွေထဲကို ကုလားတွေ ကမန်အရေခြုံပြီး ဘယ်လောက် များများစားစား ၀င်ရောက်နေရာယူထားကြပြီလဲ၊ စဉ်းစားမိတိုင်း တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမိရတယ်။
ကမန်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သွတ်သွင်းလိုက်တာကတော့ ၁၉၇၄-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအတည်ပြုပြီးမှ မဆလ အစိုးရက သတ်မှတ်လိုက်တာ။ မြန်မာပြည်သူတွေ အကုန်လုံးကို ချပြအသိပေးဖို့ မပြောနဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုပင် မေးစမ်းမကြည့်ပဲ ထင်သလိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ရခိုင်စကားပြောပြီး ရခိုင်မှာ အနေကြာလာတဲ့ ဒီကမန်လူမျိုးတွေကို ခင်မင်မှုအစွဲနဲ့ ရခိုင်ပညာရှင်တစ်ချို့က မဆလ အစိုးရနဲ့အတူ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံခဲ့ပေမယ့် ပညာရှင်အများစုနဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေက လုံးဝလက်မခံခဲ့ကြဘူး။
လက်မခံတဲ့ ရခိုင်ပညာရှင်အများစုနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားကတော့- နံပါတ် (၁) အချက်-ကမန်ဆိုတာ မြို၊ သက်၊ ဒိုင်းနက်၊ ခမွီး၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကရင်တို့လို ဒီမြေ၊ ဒီရေမှာ ဘယ်အချိန်ကာလကစပြီး နေထိုင်လာကြသလဲဆိုတာကို မှန်းဆမှုသာပြုနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား စစ်စစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ ၁၆၆၀-ခုနှစ်လောက်မှာမှ တိုင်းတစ်ပါး အာဖကန်နစ္စတန်က လာရောက်နေထိုင်သူတွေ ဖြစ်နေလို့ပဲ။
နံပါတ် (၂) အချက်က ကမန်ကိုအကြောင်းပြုပြီး ကုလားတွေ ရခိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားမှုတွေ သမိုင်းမှာရှိနေတော့ ကမန်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာဟာ ကုလားတွေအတွက် တိုက်ကွက်ကြီး ဖြစ်လာနိုင်တာကို ရခိုင်ပညာရှင်အများစုနဲ့ အသိအမြင်ကျယ်တဲ့ ပြည်သူတွေက သိထားခဲ့ကြသလို ထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်း ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။ ၁၉၉၀-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကမန်ကိုရှေ့ကတင် ကုလားတွေက ၀ိုင်းပြီးမေးပေးခဲ့လို့ စစ်တွေမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာပင် ကမန်တစ်ယောက် မဲအနိုင်ရခဲ့တယ်။
ခုဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပဋိပက္ခမှာလည်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ခိုးဝင်၊ တိုက်ဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အားလုံးနဲ့ ဖြစ်နေကြတာပါလို့ ကမ္ဘာကို လှည့်စားချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကုလားတွေက ကမန်ကိုပါ ပြဿနာထဲပါလာအောင် ဆွဲသွင်းနေတယ်။ ၈၈-ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးစကားကို ငှားယူပြောရရင် " ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ သူတို့ရဲ့အရေးကို အစ္စလာမ်ဘာသာအရေး ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးနေကြတာပါ "လို့ ပြောချင်တယ်။
ကမန်ဆိုတာက အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တာကလွဲလို့ ရခိုင်လိုပြောပြီး၊ ရခိုင်လိုနေကြသူတွေ၊ ကုလားစကား(ဘင်္ဂလီစကား)လည်း မတတ်ကြဘူး။ ကုလားစာတတ်ဖို့ကအဝေးကြီး၊ ကုလားတွေဟာ သူတို့ထက် နိမ့်ကျတဲ့လူမျိုးတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး ကုလားနဲ့သားပေး သမီးယူလည့် မလုပ်ခဲ့ကြဘူး၊ ရခိုင်တွေနဲ့ပဲ ရင်းနှီးခင်မင်စွာနဲ့ နေထိုင်လာခဲ့ကြတယ်။
ခက်တာက ကုလားစာမတတ်တော့ ဗလီဆရာတွေကို ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဘက်က ခေါ်ယူကြရတယ်။ အဲဒီအယူသည်း ဗလီဆရာတွေရဲ့ မှိုင်းတိုက်မှု၊ စစ်အစိုးရလက်အောက် ရခိုင်တွေ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ဆင်းရဲမွဲတေလာမှု၊ ကုလားတွေက နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့တွေ ရရှိနေမှု၊ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူနည်းနဲ့ ကုလားတွေ ကြီးပွားလာမှုတွေကြောင့် ကမန်ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ကုလားတွေဘက်ကို ယိမ်းလာကြတယ်။ ဘယ်အထိယိမ်းလာလဲ ဆိုရင် ပင်လယ်ပြင်ကို စက်လှေနဲ့ ငါးဖမ်းထွက်တော့ စက်လှေပေါ်မှာ ငါးယောက်လောက်ပဲပါသွားတာ ပြန်ဝင်လာတော့ ကုလားအယောက် နှစ်ဆယ်လောက် ပါလာတယ်။ သူတို့ရပ်ရွာတွေမှာ ၀ှက်ထားပေးပြီး လာဒ်ပေးလာဒ်ယူနည်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်ယူပေးလိုက်ကြတယ်။ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောက ဗလီဆရာတွေရဲ့ ဘာသာရေးမှိုင်းက ဘယ်လောက်ထိ ၀င်လာလဲဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံ တိုက်ညီနောင်ကို လေယာဉ်နဲ့ ၀င်တိုက်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁-ခုနှစ် (၉)လပိုင်း၊ (၁၁)နေ့ကဆိုရင် စစ်တွေမြို့ နာဇီရပ်ကွက်နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ကျောက်ဖြူမြို့ ကုလားပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက်မှာ ထမင်းစားပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ကြတယ်။ (၉/၁၁)နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုလည်း နှစ်တိုင်း အောင်ပွဲပြုလုပ်ကြသေးတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တစ်စတစ်စ ဝေးကွာလာတဲ့ ကမန်တွေဟာ ခုပဋိပက္ခမှာလည်း ကုလားဘက်ပါသွားတာ မဆန်းပါဘူး။
၂၀၁၂.၁၀.၃၀-ရက်နေ့ ကျောက်နီမော် ပဋိပက္ခအတွက် ၃၀-ရက်နေ့ည BBC အကြီးတမ်းသတင်းထောက် ဦးကိုကိုအောင်က Interview လုပ်တာကြားလိုက်ရတယ်။ ကမန်ခေါင်းဆောင် "အုလမာ သာသနာ့ပညာရှင်များအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်တင်"ဆိုတဲ့လူဟာ အင်တာဗျူးမှာ ဗမာစကားကို ကုလားလိုပြောနေတယ်။ အမှန်က ကမန်ဆိုတာ ကုလားစကားတစ်ခွန်းမှ တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ ရခိုင်စကားကို ရခိုင်တွေပြောသလိုပဲ ပီပီသသပြောနေကြတဲ့လူတွေ၊ သူတို့ ဗမာစကားပြောရင်လည့် ရခိုင်တွေဝဲသလိုပဲဝဲကြတယ်။ ခုတော့ ကမန်ခေါင်းဆောင် "ဦးမောင်မောင်တင်"ဟာ ကုလားသံနဲ့ပြောနေတော့ သေချာတာပေါ့ ကမန်ဝင်ပေါက်က ၀င်နေတဲ့ ကုလားတစ်ယောက်ပေါ့။
သံတွဲဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလားမီဒီယာများအ၀င် BBC, ဧရာဝတီစသော ပြည်ပမီဒီယာများတွင် ယခင်အသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည့် "ရိုဟင်ဂျာ" "မူဆလင်" စသောအသုံးများကို မသုံးတော့ဘဲ 'ကမန်" ဆိုသောအသုံးအနှုန်းကို စတင်သုံးစွဲလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်...။ ဒါဟာ ပိုပြီးတော့ အန္တရယ်များပါတယ်..။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမန် ဆိုတာဟာ မြန်မာအစိုးရက တရာဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျိုးနွယ်စုဖြစ်နေလို့ပါ..။ ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ ရှိသမျှကုလားလူမျိုးများကို ကမန် ဟူသောဝေါဟာရကို အသုံးချကာ နိုင်ငံရေးအရ နောက်တစ်မျိုး ကြိုပမ်းလာနိုင်လို့ပါဘဲ..။ တကယ်တော့ ကမန် ဆိုတာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အစိုးရ လ.၀.က စာရင်းအရ ၂ သောင်းကျော်သာရှိပါတယ်..။ ကမန် ပါတီကလဲ ကမန် ဆိုတာဟာ ဘင်္ဂလီကုလားများနှင့် လုံးဝ ဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်း အတိအလင်းကြေငြာ ထားပြီးသားပါ..။ အားလုံး သတိရှိကြပါစေ...........။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သာသနိကအဆောက်အဦများ မပျက်စီး မပြောင်းရွှေ့ရရေး NLD ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း
လက်ပံတောင်းတောင်ရှိ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သာသနိကအဆောက်အဦများ မပျက်စီး မပြောင်းရွှေ့ရရေးအတွက် မန္တလေးမှ လက်ပံတောင်းတောင်အထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများနှင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်သော စစ်ကိုင်းတိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် အာဏာပိုင်များကို NLD အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်သိန်းတို့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးသဖြင့် နှစ်ဖက်ပြေလည်မှုရခဲ့ပါသည်။ လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲစဉ်က မီးလောင်ဒဏ်အပြင်းအထန်ရခဲ့သော ဦးတိက္ခဥာဏကလည်း ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်း၊ လမ်းညွှန်၊ အားပေးခဲ့သည်။
တောင်ငူ၊ စက်တင်ဘာ ၃၀
တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့နယ် ပေါက်တောကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံခုံ ကျေးရွာနေ အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဓမ္မကျင့်ကာ ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ခဲ့သူ တပ်မတော်သား တစ်ဦးကို တောင်ငူခရိုင် တရားရုံးမှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီမိနစ် ၃၀ က ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အမှုကြီး အမှတ် ၄၂ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂(၁) (ဂ)အရ သေဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ခရိုင်တရားရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
“သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူက ခုနစ်ရက်အတွင်း အယူခံ ဝင်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ တောင်ငူ အကျဉ်းဦးစီးဌာနကို ပေးပို့ထားပါမယ်” ဟု တောင်ငူခရိုင် တရားရုံးမှ အမည်မဖော်လိုသူ ခရိုင်တရားသူကြီးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လူသတ်မှုသည် ယခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်က အုတ်တွင်းမြို့နယ် ပေါက်တောကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံခုံကျေးရွာ အလယ်ရှိ ရေတွင်းဘေး သွေးအိုင်ထဲတွင် အသက် ၃၀ အရွယ် ဒေါ်သင်းသင်းဆွေ လဲကျ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ဒေါ်သင်းသင်းဆွေမှာ အဝတ်လျှော်ရန် ယင်းရေတွင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ အမျိုးသားဖြစ်သူ ဦးအေးဆွေ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ သိရှိရသည်။
ယင်းနေ့တွင် သံသယရှိသူ တစ်ဦးကို ရဲအရာရှိများ၏ မေးမြန်း စစ်ဆေးချက်များအရ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ အမှတ် (၆၀) ခြေလျင်တပ်ရင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် တပ်သားဖိုးသားက ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသဖြင့် ၎င်းကို အုတ်တွင်းမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာတပ်က လွှဲပြောင်းစစ်ဆေးကာ စစ်ဘက်တရားရုံးတွင် ထောင်ဒဏ်ခြောက်လ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် တောင်ငူ အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကာ အရပ်ဘက် တရားရုံမှ ဆက်လက် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တရားရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
သံသယရှိသူ ဖိုးသားက ဒေါ်သင်းသင်းဆွေကို အဓမ္မကျင့်ပြီးနောက် ဓားဖြင့် ထိုးခုတ်ခဲ့သဖြင့် ဒေါ်သင်းသင်းဆွေတွင် ဦးခေါင်းပြတ်ရှ ဒဏ်ရာသုံးချက်၊ ဘယ်ဘက် လက်ကောက်တွဲလွဲပြတ်ကျ ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဘယ်ဘက်နားထင်မှ ဘယ်ပါးအထိ ကန့်လန့်ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာတစ်ချက်နှင့် နားရွက်ပြတ် ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရခြင်းအပြင် အဓမ္မမှု ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် တောင်ငူ ခရိုင်တရားရုံးက ဖိုးသားကို သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ခရိုင်တရားရုံး၏ စီရင်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ အဓိက ဆောင်ရွက်မည့် အဋ္ဌမအကြိမ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မတိုင်မီ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ရာ ယခုစတင်မည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို သြဂုတ် ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီ၏ ဦးတည်ချက်၊ သက်တမ်း၊ တာဝန်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုပြန်လည် စတင်မည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကာလတစ်လျှောက်တွင် ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြမည်ဟု သိရသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတက သဘောထား မှတ်ချက်နှင့် ပြန်လည် ပေးပို့လာသည့် ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေနှင့် တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းများကို လွှတ်တော်စတင် ကျင်းပသည့်အချိန်မှ တစ်ပတ်အတွင်း အပြီးသတ် ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာမည့်လွှတ်တော်တွင် ဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေကြမ်းပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ပြန်လည် စတင်မည့် အဋ္ဌမအကြိမ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ထပ်တိုးဘတ်ဂျက်များကို ထပ်မံ တောင်းခံမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံတောင်းခံသည့် ဘတ်ဂျက်များသည် ထပ်မံတောင်းခံသင့် မသင့်၊ သုံးသင့် မသုံးသင့် ဆိုသည်ကို ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် လွှတ်တော်ကော်မတီ အသီးသီးမှ စိစစ်မည် ဖြစ်သည်။
စားကျက်မြေ ဧက ၂၀ သိမ်းဖို့ရန် အကြံအစည်
မြိတ်မြို့ မှာ ရဲများက ကျောင်းသား လေးဦးကို အုပ်စု...
အစိုးရ၀န်ထမ်း ခုနှစ်သိန်းကို လာမဲ့နှစ်မှာ လစာမပေးေ...
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သာသနိကအဆောက်အဦများ မပျက်စီ...
အဓမ္မကျင့် လူသတ်မှုဖြင့် တပ်မတော်သားတစ်ဦးကို သေဒဏ်ခ...